छुवाछुतलाई बढावा दिनेहरूलाई समाजले बहिष्कार गर्नुपर्छ– नेता नेपाल
प्रस, वीरगंज, १५ असार/ पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मुलुकले छुवाछुत प्रथालाई कानुनी अपराध मानिसकेको अवस्थमा पनि समाजमा छुवाछुत प्रथा कायमै रहेको उल्लेख गर्दै छुवाछुतलाई बढावा दिने जोसुकैलाई समाजले बहिष्कार गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेता नेपालले जातीय तथा छुवाछुत प्रथाका कारण समाजको अग्रगतिमा अवरोध सृजना भइरहेको बताउँदै छुवाछुतको आधारमा जनतालाई विभाजित गरी कमजोर बनाउने सामन्ती नीतिलाई अझै कतिपय समाजले बुझि नसकेको विचार व्यक्त गरेका छन्। एमालेका वर्गीय सङगठन नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज पर्साको ५ औं जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमका मुख्य अतिथि नेपालले सो कुरा बताएका हुन्। अहिले पनि खासगरी मधेसमा छुवाछुतको परम्परा विद्यमान रहेको छ त्यसको अन्त्यका लागि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता एवं सचेत जनसमुदायको अग्रसरता जरुरी छ–नेता नेपालको कथन थियो। दलहरू शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन असफल भएको गुनासो गर्दे पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले शान्ति प्रक्रियाको मुख्य बाधक ए. माओवादी रहेको आरोप लगाएका छन्। मुक्ति समा
सुरक्षा देऊ पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्न तयार छौं– डिलर एसोसिएसन
प्रस, वीरगंज, १५ असार/ बारा–पर्सा पेट्रोलियम डिलर एसोसिएसन सङ्घर्ष समितिले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्न तयार रहेको जानकारी गराएको छ। नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी सङ्घको आन्दोलनविरुद्ध उभिएका डिलर एसोसिएसन सङ्घर्ष समितिले वीरगंजस्थित होटल सिजनमा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सो जानकारी गराएका हुन्। खेतीपातीको समयमा पेट्रोलियम पदार्थको अभावले कृषकहरू मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै सहज लोडिङ एवं आपूर्तिको लागि सुरक्षा एकाइले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरेमा एसोसिएसनका ट्याङकर पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्न तयार रहेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक ब्रह्मदेव चौधरीले बताएका छन्। नेपाल आयल निगमले बरौनी रूटका ६० वटा ट्याङकर रक्सौल रूटमा ल्याउने निर्णय स्थगित गरेकोमा सो निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घले मङगलवारदेखि अमलेखगंज क्षेत्रीय डिपोमा लोड–अनलोड ठप्प पारेका छन्। महासङ्घ पक्षीय प्रदर्शनकारीहरूले एसोसिएसनको ट्याङकरमा समेत तोडफोड गरेको एशोसियशनले आरोप लगाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घर्ष समितिका संयोजक चौधरी, सदस्यहरू श्रीला
विश्वकप छनोट खेलमा नेपालको जित
काठमाडौं, १५ असार/रासस फिफा विश्वकप २०१४ को छनोट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपालले ऐतिहासिक जित हासिल गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा नेपालले पूर्वी टिमोरलाई २–१ गोलले पराजित गर्‍यो। नेपालका लागि अनिल गुरुङले खेल सुरुआत भएको १५ औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत् गोल गरेका थिए भने जुमानु राईले खेलको मध्यान्तरपछिको ७० औं मिनेटमा थप एक गोल गरी नेपाललाई जिताउन सफल भए। यस्तै पूर्वी टिमोरका लागि कुरियाले मध्यान्तरपछिको दोस्रो मिनेटमा एक गोल गरेका थिए।
वैवाहिक संरचनामा बदलिंदो ग्रामीण अवधारणा
शिक्षा र सञ्चारले समुदायमा चेतना ल्याउँछ र चेतनाले समाजलाई अग्रगतितिर डोर्‍याउँछ। जस्तोसुकै ग्रामीण समाजको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने समाजमा परिवर्तनहरू आइरहेका देखिन्छन्। समाजको हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन आइरहन्छ। सहरी क्षेत्रमा परिवर्तनको गति तीव्र हुन्छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा परिवर्तनको गति केही मन्द हुन्छ। तर सहरमा आएको परिवर्तनले गाउँसम्म स्वीकारोक्ति नपाएसम्म त्यस्तो परिवर्तनलाई दीर्घकालीन मान्न सकिने अवस्था हुँदैन। अझ त्यस्तो परिवेशमा जहाँ अधिकांश नागरिक ग्रामीण समुदायमा बस्छ र अल्पांश नागरिक सहरी समुदायमा बस्छ। सहरी समुदायको तुलनामा ग्रामीण समुदाय बढी बन्धनयुक्त भएको हुनाले कुनै पनि परिवर्तनको सहरी क्षेत्रमा जस्तो प्रभाव पर्न नसकेको हो। यस बन्धनलाई कट्टरता वा ग्रामीण विशिष्टता पनि मानिन्छ। अलि हाम्रो समुदायको घेराभन्दा निकै पर पाश्चात्य समुदायमा दृष्टि पुर्‍याउने हो भने त्यत्ता पनि त्यहींका स्थानीय विशिष्टताहरू पाउन सकिन्छ। त्यस्ता विशिष्टताहरू भलै हामीभन्दा उन्नत होऊन्, पृथक होऊन् र ठूलो भौगोलिक क्षेत्रमा फैलिएका होऊन्। पाश्चात्य समाजभन्दा हाम्रो समाजमा जातीय, सांस्
दियो र लालटिन उज्यालोका प्रतीक हुन्। अँध्यारोमा बाटो देखाउन दियो अथवा लालटिन प्रयोग गरिन्छ। हावा, हुरीले दियोलाई निभाउँछ भनेर त्यसको उत्कृष्ट रूप लालटिनको आविष्कार भएको हो। जस्तोसुकै हावा–हुरीमा पनि लालटिन बाल्दा हतपति निभ्दैन। यस कुरालाई अलि गहनरूपमा विचार गर्ने हो भने जस्तोसुकै अप्ठेरो, विषम र प्रतिकूल समयमा पनि न्याय हराउनुहुँदैनस न्याय सम्पादनमा अलमल गर्नुहुँदैन भन्नु हो। हावा–हुरी अन्याय र अनाचारका प्रतीक हुन् भने लालटिन न्यायको प्रतीक हो। त्यसैले होला नेपालभरिका पत्रकार महासङ्घका जिल्ला शाखाहरूले मङगलवारका दिन सम्बद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् सरकारलाई बलिरहेको लालटिन पठाएर, लालटिनजस्तै निर्विकार र निर्भय न्याय सम्पादन गर्न आग्रह गरेका हुन्। नेपालमा अहिले न्याय हराइरहेको अवस्था छ। यहाँ दिनहुँ हत्या–हिंसा, लुटमार, ठगी, कुटपिट हुन्छ। दोषीलाई पक्राउ गरेर कानुनी राज्यको परिपुष्टि गरिन्न, बरु पीडित न्यायको लागि कराइरहन्छ, दोषी सक्षम–सबल अझ कानुन बहाल गर्न जिम्मेदारी पाएका राज्यको सम्बद्ध निकायबाट संरक्षण पाएर उन्मुक्त घुमिरहेको हुन्छ। नागरिक दैनिकका विराटनगर संवाददाता खिल
निर्णय स्थगितको महासङ्घद्वारा विरोध अमलेखगंज डिपोमा लोड अनलोड ठप्प
दिवाकर भण्डारी, पथलैया, १४ असार/ नेपाल आयल निगमले बरौनी रूटका ६० ट्याङकर रक्सौल रूटमा ल्याउने निर्णय स्थगित गरेकोमा विरोध गर्दै नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घले मङगलवार अमलेखगंजस्थित क्षेत्रीय डिपोमा लोड अनलोड ठप्प पारेको छ। रूट परिवर्तन गरिएको उक्त निर्णय आयल निगमले एकलौटी ढङगले स्थगित गरेकोमा आफूहरूको आपत्ति रहेको जनाउँदै महासङ्घले त्यसको विरोधमा अमलेखगंज डिपो ठप्प पारेको हो। निगमको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै महासङ्घसम्बद्ध पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले बिहानैदेखि अमलेखगंज डिपोमा धर्ना दिएका थिए। उनीहरूले दिनभर डिपोमा पेट्रोलियम पदार्थ लोड अनलोड हुन दिएनन्। नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ अन्तर्गत बरौनी–अमलेखगंज रूट व्यवस्थापन समितिका सदस्य विनोद मानन्धरले आयल निगमले रूट परिवर्तन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरेसम्म डिपो ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। मानन्धरले निगमको यस्तो निर्णय आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए। निगमले नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घको सिफारिस र उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा यसअघि बरौनी रूटका ६० वटा ट्याङकर रक्सौल रूटमा
गहनापसलमा लुटपाट प्रयास असफल
आरके पटेल, वीरगंज, १४ असार/ वीरगंजको माईस्थानमा स्थिति नेपाल अलङकार ज्वेलर्समा आज बिहान करिब ११:४५ बजे अज्ञात समूहले लुटपाटको असफल प्रयास गरेको छ। ४/५ जनाको समूहमा रहेको उक्त लुटेराहरूले गहना किन्ने भन्दै सो पसलमा पुगी हतियार देखाएर तिजोरी खोल्न पसलधनीलाई धम्क्याएपछि पसलधनीले नमान्दा कञ्चटमा रिवाल्भर तेर्‍स्याइ रकम तथा गरगहना लुट्न थालेका थिए । सो लगत्तै प्रतिकारमा उत्रिएका पसलधनीमाथि लुटेराहरूले गोली प्रहार गर्न खोज्दा गोली नपड्किएपछि उनीहरू रित्तै भागेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। लुटेरासँग रहेको दुई थान ब्याग, एक थान रिवाल्भर सोमा लाग्ने गोली ६ राउन्ड तथा छुरा प्रहरीले घटनास्थलबाट बरामद गरेको छ। लुटेराहरूको खोजतलास भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन्द्र केसीले बताएका छन्। माईस्थानमा लगाइएको सीसीटीभी क्यामेराले लुटेराहरू भागिरहेको दृश्य खिंचेको र सो दृश्यको आधारमा पर्सा/बारामा तिनीहरूको व्यापक खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको विरोधमा सुनचाँदी व्यवसायीहरूले लुटेराहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गर्दै वीरगंजका सम्पूर्ण गहनापसलहरू बन्द गराएका थिए। सुनचाँदी व्यवसाय
दोहोरो नागरिकताको आरोपमा भारतीय नागरिक पक्राउ
आरके पटेल, वीरगंज, १४ असार/ दोहोरो नागरिकता लिएको आरोपमा प्रहरीले हिजो शङकराचार्य गेटबाट भारतीय नागरिक केदारप्रसादलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ। पर्सा जिल्ला विश्रामपुर–७ बाट केदारप्रसादको नाममा नागरिकता लिएका उनले केदार महतोको नामबाट बिहार, पूर्वी चम्पारण अरेराजबाट मतदाता परिचयपत्र, भारत सरकारको आयकर कार्डसमेत रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटना विवरण अनुसार प्रहरीले चेकजाँच गर्दा उनीसँग ७१ हजार भारु, १४ वटा विभिन्न बैंकका एटीएम कार्डहरू र दुवै देशको नागरिक भएको प्रमाणपत्रसमेत प्रहरीले फेला पारेको छ । जालीनोटको कारोबार गर्ने सूचनाको आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धानको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सामा राखेको छ। पक्राउ परेको नोट सक्कली नै रहेको तर दोहोरो नागरिकता रहेको प्रहरीले बताएको छ। महतोसँग नेपाल एसबीआई बैंकको एटीएम कार्ड ५ थान, एभरेस्ट बैंकको एटीएम १ थान, सिद्धार्थ बैंकको एटीएम २ थान, ज्योति विकास बैंकको एटीएम ४ थान र क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकको एटीएम कार्ड १ थान बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी निरीक्षक मनोज लामाले जानकारी दिए ।
भारतमा रामदेव : नेपालमा को ?
विनोद गुप्ता नेपाल र भारतमा अहिले सबभन्दा चर्चित विषय एउटै हो। त्यो हो भ्रष्टाचार । शीर्षक एक भए पनि मुद्दा चाहिँ फरक छ। त्यो के भने भारतमा भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि आन्दोलन भएको छ भने नेपाल सुडान घोटालामा भएको भ्रष्टाचारले आन्दोलित भएको छ। भारतमा अन्ना हजारेले सुरु गरेको यो आन्दोलन बाबा रामदेवसम्म आइपुग्दा बाटो गुमाएको जस्तो देखिए पनि अन्ना हजारेले पुन: सत्याग्रह थालेर यसलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेका छन्। भारतमा सीबीआई (सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेशन) भन्ने एउटा संस्था छ, जसलाई सरकारको आदेशपछि मात्र अनुसन्धान गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार प्राप्त छ। नियन्त्रित क्षेत्राधिकार भएर पनि यस संस्थाले गैरराजनीतिक प्रकृतिको मुद्दाहरूमा राम्रै सफलता प्राप्त गरेकोले भारतमा यसको छवि उज्ज्वल छ। तर राजनीतिक प्रकारका मुद्दाहरूमा प्राय: यसले अनुसन्धान गर्न नपाउनु र बोफोर्स काण्डदेखि अहिलेसम्म निरन्तर भारतमा राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्टाचार भएको खुलासा भइरहनु तर भ्रष्टाचारीहरू कानुनी दायराभन्दा प्राय: बाहिर रहनुले पनि भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको लागि उर्बरभूमि भयार भएको हुनुपर्दछ। यसबाहे
सुरक्षा र जिम्मेवारी
हिन्दू युवा सङ्घ नेपालका तत्कालीन केन्द्रीय अध्यक्ष स्व. काशी तिवारीको हत्या भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । बितेको वर्ष असार १२ गते दिउँसो वीरगंज–१४ स्थित खडगेश्वर बाबाको मठनजिक अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरी तिवारीको हत्या गरेको हो। हत्याको विरोध एवं दोषीमाथि कारबाईको माग गर्दै सङ्घले आन्दोलन चर्काएका थिए। हत्यारा पत्ता लगाइ कानुनी कठघरामा उभ्याउने सरकारी प्रतिबद्धता पछि आन्दोलन मत्थर भएको हो। तिवारीको हत्या हुनुपूर्व नै उनको हत्या हुँदैछ भन्ने कुरा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायलाई थाहा थियो। आफूलाई पटक–पटक ज्यान मार्ने धम्की आइरहेको कुरा स्व. तिवारीले प्रहरीमा जाहेरी गरेका थिए। हत्यापश्चात् शङकाको आधारमा एकीकृत माओवादीका केही नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि पछि उनीहरूलाई मुक्त गरियो। जनताको जीउधन तथा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारी प्रयास भयो भने कुनै पनि घटनाका दोषी पत्ता लगाउन गाह्रो छैन। घटनाका पीडितहरू सरकारी प्रतिनिधि तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नोअगाडि पाउँदा राहत महसुस गर्छन्। सरकारी प्रतिबद्धतामाथि विश्वास गर्छन्। त्यसैले त ठूलाठूला आ
स्वस्थ व्यक्तिले प्रत्येक तीन महिनामा रक्तदान गर्न सक्छ
आरके पटेल, वीरगंज, १३ असार/ रक्तदानप्रति जनचेतना जगाउन आज वीरगंजमा रक्तदान उत्प्रेरणा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपाल रेडक्रस रक्तसञ्चार केन्द्र वीरगंजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा शल्यक्रिया गर्दा, दुर्घटनामा पर्दा, प्रसुतिको बेलामा मानिसलाई तुरून्त रगत दिनुपर्ने बेलामा रगतको सहज आपूर्ति नहुँदा मानिसको मृत्युसमेत हुन सक्ने भएकोले रक्तदान कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी भई रक्तदान गर्न जोड दिइएको थियो। जो कसैलाई पनि जुनसुकै बेला रगतको खाँचो पर्ने हुँदा नियमित रक्तदान गरी रगत आवश्यक परेका सबै बिरामीलाई रगतको सहज आपूर्तिमा सहयोग पुर्‍याउन अपिल गरिएको थियो। चेतनाको कमीले रक्तदान गर्दा कमजोर भइन्छ भन्ने भ्रम अझै पनि हाम्रो समाजमा कायम नै रहेको नेपाल रेडक्रस केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाकी कार्यकारी निर्देशक डा. मनिता राजकर्णिकारले बताइन्। उनले रक्तदानपछि हाम्रो शरीरले सामान्य प्रक्रियाबाट रगतको सजिलै आपूर्ति गर्ने हुनाले रक्तदानपछि शरीरले कमजोरी महसुस नगर्ने बताइन्। स्वस्थ व्यक्तिले रक्तदानपछि कमजोरी महसुस गर्नु भनेको रक्तदानप्रतिको नकारात्मक मानसिकताले गर्दा हो, उनले बताइन्। र
अज्ञात समूहद्वारा वृद्धको हत्या
प्रस, वीरगंज, १३ असार/ आफ्नै घरमा सुतिरहेका एक वृद्धलाई अज्ञात समूहले गोली हानी हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक भीमकिरण बोगटीले बताएका छन्। हत्या गरिएका पर्सा जिल्ला गम्हरिया गाविस–३ निवासी ६५ वर्षीय शहीद देवान हुन्। मृतक देवानको टाउकोको देब्र भागमा ठूलो घाउ देखिएको थियो। गोली हानिएको वा धारिलो हतियार प्रहार गरिएको पोस्टमार्टमपछि मात्र बताउन सकिने प्रहरीले जनाएको छ। शङकाको आधारमा प्रहरीले सोही गाविस–४ निवासी हरेन्द्रप्रसाद यादव र राजेन्द्र साह तेलीलाई आवश्यक कारबाईको लागि पक्राउ गरेको छ। पर्साका प्रहरी उपरीक्षक रमेश खरेल घटनास्थल पुगी घटनाको प्रकृतिबारे बुझेका थिए। आज बिहानै सपरिवार गाउँ छोडी भागिरहेको अवस्थामा गाउँलेले राजेन्द्र साह तेलीलाई पक्राउ गरी कुटपिट गरी प्रहरीको जिम्मा लगाएका थिए। प्रहरीले घटनामा प्रयोग भएको तीन थान मोटरसाइकलसमेत नियन्त्रणमा लिएको छ।
अन्तरविद्यालय राष्ट्रिय फूटबल प्रतियोगिता
काठमाडौं, १३ असार/रासस अखिल नेपाल फूटबल सङ्घद्वारा आयोजित अन्तरविद्यालय राष्ट्रिय फूटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको चार खेलमा ओपन हाउस स्कूल, काठमाडौं भ्याली उच्च मावि, बाल विकास मावि र टीका विद्याश्रम स्कूल विजयी भएका छन्। ललितपुरको एन्फा कम्प्लेक्सस्थित फूटबल खेल मैदानमा सञ्चालित पहिलो खेलमा ओपन हाउस स्कूलले एसियन पब्लिक स्कूललाई ३–१ गोलले पराजित गर्‍यो। यस्तै दोस्रो खेलमा काठमाडौं भ्यालीले ब्राइट होराइजन चिल्ड्रेन होमलाई ३–० गोलले हरायो। काठमाडौं भ्यालीका लागि दावा थुम्बा शेर्पाले ह्याट्रिक गरेका थिए। यसैगरी तेस्रो खेलमा बाल विकास माविले ब्राइट एन्जल्स स्कूललाई १–० गोलले पराजित गर्‍यो। बाल विकासका लागि एक मात्र गोल अकबर लामाले गरेका थिए। चौथो खेलमा टीका विद्याश्रमले स्कलर्स होम एकेडेमीलाई ३–१ गोलले हरायो। टीका विद्याश्रमका लागि प्रवीण भुजेल, कृष्ण खड्का र कुश थापामगरले एक/एक गोल गरे भने स्कलर्स होमका लागि अभिषेक खड्काले एक गोल गरेका थिए।
किसान–किसानबीच कुनै कुरामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने त्यो हो पानी। आपसी सम्बन्ध जतिसुकै राम्रो होस्, जग्गामा पानी चाहिने बेला भयो भने दुई संधियार किसानबीच हुने तानातान अन्त कतै हुँदैन। नेपालको साधन–स्रोतको सीमितताले गर्दा प्राप्त प्राकृतिक संसाधनको उपयोग नै गर्न सकेको छैन। त्यस्तोमा छिमेकी मुलुक भारत, जसलाई पानीको आवश्यकता पनि छ र पानी अन्तत: बगेर उसकै मुलुकमा जाने हो, सँग पानी–उपयोग–सम्झौता हुनु अनुचित पनि होइन। त्यसै सन्दर्भमा नेपाल–भारतबीच सम्झौता भई नारायणी नदीको पानीको सदुपयोग गर्ने रणनीति तयार भयो। माग्नेलाई तातो भात भनेजस्तै प्रविधि, पूँजी लगानी गरेको भारतले नारायणी नदीमा बाँध बाँधी पानी बाँडफाँड गर्दा आफूले तीन हजार क्युसेकभन्दा बढी पानी लिएर नेपाललाई ८५१ क्युसेक मात्र दिए पनि, त्यै पानी पनि समयमा पाउन नसक्नु नेपाली किसानहरूको पीडा हो। नीतिगत र प्राविधिकरूपमा गण्डक सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेकोले बर्सेनि भारत र नेपालका किसानबीच पानीको उपयोगबारे किचलो हुने गरेको छ। गण्डक मूल नहरबाट नेपाललाई प्रदान गरिने पानी भारतीय भूभाग भएर आउँछ। पानीलाई दक्षिणबाट उत्तर बगाउने कोशिश गरियो, पह
नेपाली सेनामा मधेसीको प्रवेश- अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद यादव
ठूलो बखेडापश्चात् पाँचबुँदे सहमतिद्वारा संविधानसभाको म्याद तीन महिना थपिएको छ। सहमतिका बुँदाहरू उत्साहजनक नदेखिए पनि एउटा गम्भीर सङकट टरेको छ। जेठ १४ गते राति म्याद थप नभएको भए वैधानिक संस्थाको शून्यता सिर्जना हुने, राजनीतिक अन्योलता र अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्थ्यो। संविधानसभाबाट संविधान बन्ने सम्भावनाको निमिट्यान हुन सक्थ्यो। सहमतिको तेस्रो बुँदामा रहेको प्रावधानले मधेसको मुद्दालाई थप ऊर्जा मात्र प्रदान गरेको छैन, विगतमा मधेसी मोर्चासँग भएका आठबुँदे र २२ बुँदे सहमतिलाई थप वैधानिकता प्रदान गरेको छ। संसद्द्वारा अनुमोदित भएर राज्यले मधेसको सवाल स्वीकार गरेको पुष्टि भएको छ। संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तको आधारमा मधेसको माग किमार्थ अस्वीकार कसैले गर्न पाउने छैन। मोर्चासितको सहमतिलाई वर्तमान प्रमले विगतमा अस्वीकार गरे पनि सहमतिमार्फत् स्वीकार गरेकाले कार्यान्वयनको धेरै हदसम्मको अवरोध पनि हटेको भन्न सकिन्छ। सहमतिमा सही गर्ने तीनवटै पक्ष यतिखेरको राष्ट्रिय राजनीतिको सूत्रधार रहेकोले मोर्चासँग गरिएको सहमतिले थप ऊर्जा प्राप्त गरेको छ। यो मधेसको निम्ति हर्षको विषय हो। २०६४ फागुन १६ गत
समग्र मधेस एक प्रदेशको मुद्दा ओझेलमा पर्ने– उपप्रम यादव
आरके पटेल, वीरगंज, १२ असार/ मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल फुटेको होइन सुदृढीकरण भएको दाबी परराष्ट्रमन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले गरेका छन्। मधेसी जन अधिकार फोरम नेपालको वीरगंजमा सम्पन्न जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दैं उनले सो कुरा बताएका हुन्। संविधान बनाउन नचाहनेहरूले नै संविधानसभा विघटन गर्न आवाज उठाइरहेका छन्, उनले भने। संविधान नबने मधेसीहरूले चाहेको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त मधेस प्रदेश नारामा नै सीमित रहने उपप्रधानमन्त्री यादवले बताए। संविधानसभामा दुई तिहाइ बहुमत भएकोले संविधान बन्ने पक्का भएको कारण नेपाली काङ्ग्रेस एवं नेकपा एमालेका केही नेताहरूको प्रयासमा मधेसी जन अधिकार फोरम नेपालबाट केही सभासद्हरूलाई पैसाको बलमा पार्टी फोड्न लगाइ षड्यन्त्र गरेको आरोप यादवले लगाए। पार्टी फोडेर संविधान बनाउन अवरोध पुर्‍याउने ती मधेसी गद्दार नेताहरूले मधेसीहरूको हकहितका लागि सोच्नु भनेको बालुवामा पानी खन्याएजस्तै हो भनी यादवले बताए। मधेस विद्रोहबाट जन्मेको मधेसी जन अधिकार फोरम नेपालले नै मधेसीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने ठोकुवा उनले गरेका छन्।
म्याद थपले प्रजातन्त्र कमजोर हुने– अध्यक्ष थापा
प्रस, वीरगंज, १२ असार/ सर्वोच्च अदालतको फैसला र संविधानको मर्मविपरीत तीन दलले संविधानसभाको म्याद बढाएको आरोप राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले लगाएका छन्। वीरगंजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष थापाले प्रजातन्त्रको सर्वोत्तम उपभोग निश्चित समयावधि पछि नयाँ चुनाव नै भएकोले संविधानसभाको थप गरिएको म्यादले प्रजातन्त्रलाई नै कमजोर पुर्‍याउने उनले स्पष्ट पारे। नेपालमा प्रतिबन्धित गौहत्या अहिले भइरहेको बताउँदै उनले गौहत्या हिन्दू धर्मावलम्बीमाथिको प्रहार भएकोले सरकारले गौहत्यामा संलग्नलाई कारबाई गर्नुपर्ने माग गरे। राप्रपा नेपालले संविधानसभाको म्याद पटक–पटक थप्ने गरेको कार्यप्रति असहमति जनाउँदै थपेको समयको विरोधस्वरूप भत्ता नलिने निर्णय गरेको पनि अध्यक्ष थापाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। थापाले ताजा जनादेशमा जानुपर्ने नेपाली जनताको माग रहेको कारण अविलम्ब देशमा चुनाव गराउन आफ्नो पार्टीको मागसमेत रहेको बताए। अध्यक्ष थापाले योजनाबद्धरूपमा देशी विदेशीहरूको दबाबमा धर्म परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भ कोट्याउँदै उनले त्यसमा आदिवासी, जनजाति, दलित वर्गलाई विभिन्
डे–नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता युनिसन र इनर्वा विजयी
आरके पटेल, वीरगंज, १२ असार/ वीरगंजमा सञ्चालित प्रथम मधेसी शहीद डे–नाइट टि–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिवार राति सम्पन्न खेलहरूमा युनिसन ग्रुप अफ स्कूल र इनर्वा क्रिकेट क्लब विजयी भएका छन्। पहिलो खेलमा युनिसनले राइजिङ क्रिकेट क्लबलाई ६० रनले पराजित गर्‍यो भने दोस्रो खेलमा इनर्वाले दुर्गा स्पोर्टस् क्लबलाई एक विकेटले पराजित गर्‍यो। पहिलो खेलमा युनिसनले टस जिती पहिले ब्याटिङ गर्दै पूरै ओभर खेलेर नौ विकेटको क्षतिमा ११२ रनको योगफल खडा गर्‍यो। जसमा विजय लामाको २८ रनको योगदान थियो। राइजिङका बलरहरूमा कञ्चन थापाले चार ओभरमा २६ रन दिई पाँच विकेट लिएका थिए। जवाफमा खेल्दै राइजिङ क्रिकेट क्लबले १५ ओभरमा सबै विकेट गुमाइ केवल ५२ रन मात्र बनाउन सक्यो। राइजिङका सफी अन्सारीले सर्वाधिक २० रन बनाएका थिए। युनिसनका बलरहरूमा आरिफ शेखले चार ओभरमा २८ रन दिई चार विकेट लिएका थिए। युनिसनका आरिफ शेख म्यान अफ द म्याच घोषित भए। दोस्रो खेलमा दुर्गा स्पोर्टसले टस जिती पहिले ब्याटिङ गर्दै पूरै ओवर खेलेर १० विकेटको क्षतिमा १४३ रन बनायो। जसमा अमित श्रीवास्तवले सर्वाधिक ३५ रन बनाएका थिए। इ
पर्सामा गरिएको शैक्षिक लगानीलाई असफलताको बाढीबाट जोगाऔं
अनन्तकुमार लाल दास प्रवेशिका परीक्षाको परिणाम आइसकेको छ। परिणाम जे आयो त्यो कुनै अप्रत्याशित थिएन। शिक्षा क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबैले पूर्वानुमान गरैकै आधारमा परीक्षाफल प्रकाशित भयो। त्यसैले होला धेरै गाइँगुइँ भएन। सबैतिर मौनता नै देखियो। परिणामलाई लिएर यसपटक पनि कुनै खासै छलफल वा सकारात्मक बहस चलेको पाइएन। अर्थात् पर्सा जिल्लाको परिणाम प्रकाशित भएको एक साता बित्न लाग्दा पनि जिल्लाको परिणामप्रति खासै बहस भएको छैन। स्थानीय र राष्ट्रिय माध्यमबाट थोर बहुत चर्चा गरिए तापनि जुनरूपमा सञ्चारमाध्यमहरूमा बहस हुनुपर्दथ्यो त्यो भएको पाइएन। अभिभावकहरूको हकहितको संरक्षण गर्ने अभिभावक सङ्घ वा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनको जिम्मा बोकेका पदाधिकारीहरूले पनि प्रवेशिका जस्तो महत्त्वपूर्ण परिणामप्रति पर्सा जिल्लाको सन्दर्भमा मन्थन गरेको पाइएन। शायद यो चासोको विषय परेन कि ? सामुदायिक वा निजी विद्यालयहरूमार्फत् पनि संस्थागतरूपमा छलफल गर्ने प्रयास भएन। शिक्षा कार्यालयले जे जति गर्‍यो त्यो नै धेरै हो जसो लाग्दछ किनभने मुलुकको वर्तमान सन्दर्भमा सरकारी निकायको हविगत नै यस्तै छ। मेरो दृष्टिकोण
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव प्रश्न:– म नेपाली नागरिक हुँ। सरकारी कार्यालयहरूबाट सूचना लिन चाहे भने पाइन्छ कि पाइँदैन ? पाइन्छ भने मैले के गर्नुपर्छ ? यसका प्रक्रियाहरू के के छन् ? –विपिनकुमार, मलङगवा, सर्लाही उत्तर:– विपिन जी, नेपालको प्रत्येक नागरिकले सरकारी कार्यालयहरूबाट सूचना लिन पाउने सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले प्रदान गरेको छ। तर केही विषयको सूचना प्रवाह नगर्न पनि सोही ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने व्यवस्था भएको विषयबाहेक अरू विषयको सूचना कानुनबमोजिमको दस्तुर लिएर कार्यालयले दिनुपर्छ। नागरिकलाई सूचना दिन र सूचनामा पहुँच स्थापित गर्न प्रत्येक कार्यालयमा एकजना सूचना अधिकारीको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनले व्यवस्था गरेको छ। सूचना लिन चाहनेले सूचना अधिकारी समक्ष कारणसहित निवेदन दिनुपर्छ। निवेदन परेपछि तत्कालै दिन सक्ने सूचना छ भने सूचना अधिकारीले सूचना दिनुपर्छ। तत्कालै दिने अवस्था छैन भने पन्ध्र दिनभित्रमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ। सूचना अधिकारीले सूचना लुकाउने उद्देश्यले गलत सूचना दिएमा वा अधूरो सूचना दिएमा वा बदनियतपूर्वक सूचना नदिएको वा सूचना दिन अस्वी
चीनमा भ्रष्टाचारको आरोपी एक सरकारी अधिकारीलाई दोष प्रमाणित भएपछि मृत्युदण्डको सजाय दिइयो। ती सरकारी अधिकारीमाथि आफ्नो १४ वर्षे कार्यकालमा ४० लाख डलर घूस लिएको र १ करोड २० लाख डलर सार्वजनिक कोष अपचलन गरेको आरोप लागेको थियो। चीनले वर्षौंदेखि पार्टीका उच्च नेताहरू तथा राज्यनियन्त्रित उद्योगहरूमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अभियान नै चलाएको छ। यसक्रममा दोषी प्रमाणित भएका व्यक्तिहरूलाई कसुर अनुसारको दण्ड बिनाभेदभाव दिने गरेको छ। बितेका दिनहरूमा पार्टीका थुप्रै शीर्षस्थ नेताहरू तथा अधिकारीहरूले मृत्युदण्ड पाइसकेका छन्। कुनै लक्ष्य हासिल गर्नु छ भने त्यसमा तत्परतापूर्वक लाग्नुपर्छ भन्ने रणनीतिको यो एउटा उदाहरण हो। आजभन्दा ६ दशक अघिसम्म अफिमको नशामा लठ्ठिइरहने निकम्मा नागरिकको मुलुक चीन आज आफ्ना यस्तै कर्मठ नीति, नियत तथा देशभक्त नेताहरूको नेतृत्व पाएर विश्वशक्ति बन्ने क्रममा निकै अगाडि पुगिसकेको छ। नागरिकको नैतिक बल उच्च पार्दै विकृति र विसङगतिहरूलाई पन्छाउँदै चीन आज सामरिक मात्र होइन आर्थिक शक्तिको रूपमा अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी बनेर उभिएको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार छैन भन्ने कुरा कसैले
रोपाइँका लागि गाउँबस्तीमा “भीखमङ्गी”
प्रस, पथलैया, ११ असार/ बारा पिपराबजारका अधिकांश महिला यतिबेला गाउँका बस्तीमा भीख माग्दै हिंड्न थालेका छन्। तर उनीहरूले खानै मुस्किल परेर भीख मागेको नभई पूजाको लागि भीख माग्न थालेका हुन्। “भीखमङ्गी” देवीदेवता पूजा गरेपछि मात्र रोपाइँ सुरु गरिने परम्परालाई पछ्याउँदै उनीहरू भीख माग्न जुटेका हुन्। “भीख मागेर पूजा गरेपछि मात्र रोपाइँ गरिने चलन छ,” स्थानीय सियादेवी दास भन्छिन्– नत्र बाली पनि उब्जँदैन, गाउँलाई पनि हानि हुन्छ। गाउँभरिका महिलाहरू एकजुट भएर भीख मागेर पूजा गरेपछि रोपाइँ गर्नाले गाउँमा सुखशान्ति हुनुका साथै बाली पनि राम्रो उब्जिने गाउँलेको विश्वास रहेको दासले सुनाइन्। महिलाहरूले यसरी भीख मागेर सङकलन गरेको रकमले बस्तीनजिकको मन्दिरमा गई ब्रह्मदेव र नागदेवीको पूजा गर्ने गरेका छन्। भीख माग्न गाउँ–गाउँ डुल्दा सबैले खुशी भएर पैसा, धान, चामल दिने गरेको अर्का स्थानीय महिला रिना साहले बताइन्। “सबैले खुशीका साथ दान दिने गरेका छन्,” साहले भनिन्– त्यही दानले पूजा गर्ने गरेका छौं। साहका अनुसार भीख माग्दा आएको धानचामल बजारमा बिक्री गरी प्रसादी र कपडा किनेर पूजा गर्ने गरिए
शान्ति र संविधानको नाममा सभासद्हरूले अर्बौं खाए– अध्यक्ष थापा
आरके पटेल, वीरगंज, ११ असार/ “चुनावबिना प्रजातन्त्र स्थापना हुन सक्दैन। चुनावले निश्चित समयावधिका लागि कसैलाई चुनेर पठाउँछ, पुस्तौंपुस्ताका लागि हैन। त्यसकारण नेपाली जनताले तीन वर्षका लागि जिताएर पठाएका सभासद्हरूले तोकेको अवधिमा संविधान बनाउन नसकेकोले ताजा जनादेशमा जानुपर्छ।” उक्त कुरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक तराई मधेस सङगठन नेपालको बाराको परवानीपुर बजारमा भएको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै बताएका हुन्। संविधान बनाउनका लागि जनताले पठाएका सभासद्हरूले मनोमानी तरिकाले म्याद बढाउँदै नेपाली जनताले तिरेका कर एवं विदेशबाट प्राप्त अर्बौं ऋण तथा सहयोग रकम खाइसकेका छन्। कसैले आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन, कसैले तलब बुझ्न, कसैले विदेशीको इसारामा संविधानसभाको म्याद पटक–पटक थप्नमा सहयोग गरिरहेको बताए। आफू गृहमन्त्री हुँदा माओवादीका जम्मा ७/८ हजार जति लडाकूहरू थिए। तर अहिले १९ हजार जति लडाकूहरू रहेको सुन्दा आफू आश्चर्यचकित भएको बताए। ०६२/०६३ सालमा दोस्रो जनआन्दोलन हुँदा राजा र नेपाली सेनाले प्रजातन्त्रलाई दमन गर्न स
डे–नाइट क्रिकेट प्रतियोगितामा गोल्डेन गेट र युनाइटेड क्रिकेट विजयी
आरके पटेल, वीरगंज, ११ असार/ मुर्ली यङग क्रिकेट क्लबको आयोजनामा शुक्रवारबाट वीरगंजमा प्रथम मधेसी शहीद डे–नाइट टी–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु भएको छ। पहिलो खेलमा नयाँ टोल गोल्डेन क्लबले रानीघाट क्रिकेट क्लबलाई ९० रनले पराजित गरेको छ। वर्षाका कारण १५ ओवरमा सीमित गरिएको उक्त खेलमा नयाँ टोलले टस जिती पहिले ब्याटिङ गर्दै पाँच विकेटको क्षतिमा १३९ रनको विशाल योगफल खडा गर्‍यो। जवाफमा रानीघाटले १४.२ ओभरमा सबै विकेट गुमाइ केवल ४९ रन बनाउन सक्यो। नयाँ टोलका रविन गुरुङ म्यान अफ द म्याच घोषित भए। दोस्रो खेलमा युनाइटेड क्रिकेट एकेडेमी कलैयाले बौधीमाई युवा क्लब काठमाडौंलाई ५१ रनले पराजित गरेको छ। टस हारी कलैयाले पहिले ब्याटिङ गर्दै १२८ रन बनायो। जवाफमा काठमाडौंले १०.३ ओभरमा सबै विकेट गुमाइ ७७ रन मात्र बनाउन सक्यो। कलैयाका सुदीप चौधरी म्यान अफ द म्याच घोषित भए। प्रतियोगिताको उद्घाटन मधेसी जन अधिकार फोरमका महासचिव एवं सभासद् आत्माराम साहले ब्याटिङ र भारतीय महावाणिज्य दूतावासका काउन्सलर एसडी मेहताले बलिङ गरी गरेका थिए।
पवित्रता र प्रकृति
–ब्रह्माकुमार रामसिंह ऐर पवित्रता मानव जीवनको सत्यता र स्वच्छताको चमक तथा सुगन्ध हो। सत्यतामा सबै प्रकारका अन्धकार, अज्ञान र दुविधाहरू समाप्त हुन्छन्। ज्ञानरूपी प्रकाशले प्रत्येक चीजको यथार्थतालाई छर्लङग पारिदिन्छ। ज्ञान प्रकाशले बुद्धिको तेस्रो नेत्र खोलिदिन्छ तथा बुद्धिलाई दिव्य र विवेकसङगत बनाइदिन्छ। दिव्य बुद्धिमा अशुद्ध विचार र सोचहरू रहँदैनन्, जसबाट निरन्तर शुद्ध सङकल्प र भावनाहरू पैदा हुन गई मन सबल र दृढ बन्न पुग्दछ। सत्यतालाई पहिचान गर्ने बुद्धि हंससमान दूध ग्रहण गर्ने, पानीलाई त्यागी दिने वा मोती रत्नलाई ग्रहण गर्ने र कङकड–पत्थरहरूलाई छोडिदिने कार्य गर्दछ। पवित्रतामा मानिसको बुद्धिले कदाचित पक्षपात वा पूर्वाग्रहका आधारमा निर्णय लिन्दैन। प्रत्येक पक्षको आदि, मध्य, अन्त्य त्यसको सुखद वा दु:खद परिणामलाई विश्लेषण गरी निर्णय लिन पुग्दछ। पवित्रता मानिसको आन्तरिक सुन्दरता हो, जसमा सदासर्वदा सकारात्मक सोच, भावना वृत्ति रहन्छ। सर्वकल्याण र उत्थानको कामना, अपेक्षा रहेको हुन्छ। स्वयंको सुख, सुविधा र फाइदाभन्दा पनि बहुजन हित, समुन्नति र उपलब्धि विद्यमान रहन्छ। पवित्रताभित्र आफ्नो मन,
अर्थात् समृद्धि र प्रगति–२ समुदायको सबभन्दा ठूलो दुर्गुण सङकीर्ण स्वार्थपरता हो। स्वार्थपरता बढेपछि समुदाय निर्दय, निष्ठुर र क्रूर प्रकृतिको बन्न पुग्छ। सहकारी जीवनमा के विशेषता हुन्छ भने त्यहाँ स्नेह, सद्भाव, उदारता, सहनशीलता, सेवा, आत्मीयता, करुणा, ममता आदि गुणहरूको विकास हुन्छ तथा अपूर्णताबाट प्रगतिशीलता तथा पूर्णतातर्फ अग्रसर हुन्छ। आदिमकालको मानिस असभ्य थियो। उसलाई नीति र मर्यादा बुझ्ने, अँगाल्ने अवसर नै थिएन। त्यसैले ऊ वनमान्छेजस्तो असभ्य, अविकसित जीवन जिउँथ्यो। क्रमश: उसले सहजीवनको आवश्यकता बुझ्यो। परिवार बनाउने, बस्ती बसाउने र एक अर्काको सुविधा–सहायताको ध्यान राख्न सिक्यो। मानव सभ्यताको व्याख्या सङ्क्षेपमा यति नै शब्दमा गर्न सकिन्छ– ‘अर्काको दु:ख भाग लगाउनु र आफ्नो सुख बाँड्नु।’ आत्मिक आनन्द पनि यही प्रक्रिया अँगाल्दा प्राप्त हुन्छ र भारी पनि बिसाउन सकिन्छ। एक अर्कामाथि दया गर्दै हिडयौं, परस्पर हातेमालो गर्दै हिंडयौं भने पारस्परिक घनिष्ठता बढ्छ र सद्भावना पनि। यस्तो भावनात्मक वातावरणमा रहेर व्यक्तिले दु:खको दिन काट्छ र असुविधाहरूबीच पनि सुविधा अनुभव गर्छ। यही का
सञ्चारमाथिको प्रहार मानव अधिकारमाथिको प्रहार
प्रस, वीरगंज, १० असार/ विराटनगरका पत्रकार खिलानाथ ढकालमाथि भएको साङ्घातिक आक्रमणको विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्सा शाखाले आज छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। महासङ्घले अगाडि सारेको आन्दोलनको दोस्रो चरणको कार्यक्रम अनुसार छलफल भएको हो। छलफलमा सहभागीहरूले सञ्चार क्षेत्र स्वतन्त्र र सुरक्षित हुन नसके नागरिकले निष्पक्ष तथा भयरहित सत्य र तथ्य समाचार पाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै सञ्चारकर्मीमाथिको प्रहार मानव अधिकारमाथिकै प्रहार भएको बताएका छन्। गुन्डाहरूले खुलेआम धम्की दिंदासमेत सरकार निरीह बनेकाले सरकार एवं मन्त्री उपस्थित कार्यक्रमहरू विभिन्न जिल्लामा सञ्चारकर्मीहरूले बहिष्कार गरेकोप्रति वक्ताहरूले ऐक्यबद्धता र समर्थन जनाएका छन्। कार्यक्रमका सहभागीहरू महासङ्घ पर्साले पनि सशक्त कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र मन्त्री सम्मिलित कार्यक्रमको बहिष्कार अभियानलाई पर्सामा लागू गर्न सुझाव दिएका छन्। महाससङघ पर्साका अध्यक्ष अशोक तिवारीको सभापतित्वमा महासङ्घको कार्यालयमा सम्पन्न छलफल तथा अन्तक्र्रियामा बार एसोसिएसन पर्साका किशोरी सिंह, रिपोर्टर्स क्लब पर्साका अध्यक्ष कन्है
मन्त्री सहभागी कार्यक्रम बहिष्कृत
प्रस, कलैया, १० असार/ ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको प्रमुख आतिथ्यमा बिहीवार कलैयामा युवा सङ्घ बाराले आयोजना गरेको कार्यक्रम बाराका सञ्चारकर्मीहरूले बहिष्कार गरेकाछन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घ बाराको आह्वानमा पत्रकारहरूले मन्त्री विष्टको कार्यक्रम बहिष्कार गरेका हुन्। मन्त्री विष्टको कार्यक्रममा सहभागी हुने पत्रकारलाई महासङ्घले कारबाई गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। विराटनगरका पत्रकार खिलानाथ ढकाललाई आक्रमण गर्ने युथफोर्स मोरङका अध्यक्ष परशुराम बस्नेतलाई सरकारले पक्रेर कारबाई गर्न नसकेको विरोधमा मन्त्री सहभागी कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएको महासङ्घ बाराले जनाएको छ।
सङ्कलन तथा अनुवाद उमाशङकर द्विवेदी एउटा जङगलमा कराल केशर नाम गरको एउटा सिंह बस्दथ्यो। धुसरक नाम गरको एउटा स्याल उसको हजुरिया थियो जो सधैं ऊसित हिंडिरहन्थ्यो। कुनै दिन एउटा जङगली हात्तीसित भएको युद्धमा सिंहलाई धेरै चोट लागेर जीउको विभिन्न ठाउँमा घाउ भएर धेरै रक्तस्राव हुँदा ऊ ज्यादै अशक्त भई एक पाइला पनि हिंड्न असमर्थ भयो। आफ्नो असमर्थताको कारण सिंह सिकार गर्न सक्दैनथ्यो। सिंहले सिकार गर्न न सकेपछि धुसरक पनि भोकबाट पीडित भएर अत्यन्त दुर्बल हुन पुग्यो। अत्यधिक दुर्बल भएपछि एक दिन उसले सिंहलाई भन्यो – ख्वामित १ भोकको कारण म पाइला पनि सार्न असमर्थ भइसकेको छु। यस्तोमा म हजुरको सेवा कसरी गर्न सक्छु ? सिंहले भन्यो — हे भाइ १ कुनै जानवरलाइ फकाएर ल्याऊ जसलाई म यस अवस्थामा पनि मार्न सकूँ। सिंहको कुरा सुनेर कुनै जानवरको खोजीमा धुसरक नजिकैको गाउँमा गयो। त्यहाँ उसले लम्बकर्ण नाम गरेको एउटा गधालाई देख्यो जो नदी किनारमा पलाएको दुभोको कमलो टुप्पा खाइरहेको थियो। गधाको नजिक गएर धुसरकले भन्यो – मामा १ नमस्कार, धेरै दिन पछि देखा पर्नुभयो। निकै दुब्लाएको पनि देख्दैछु। के भएको हो ? गधाले भन्यो – के भन
–सुशील मुडभरी वि.सं. २०३४ साल असार–साउन महिनामा ठूलो झरी परेको थियो। मैले पनि निकै ठूलो गोता खानुपरेको थियो। यी दुवै महिना नदीमा भेल उर्लेको थियो भने गाउँ देहातका फाँटहरू डुबानमा थिए। फाँटमा वृक्षहरूमात्र ठडिएका देखिन्थे र ठिङग उभिएर एकअर्कासँग हातेमालो गरेझैं लाग्दथ्यो। रूखहरू हल्लीहल्ली परपर देखिने मठ–मन्दिरलाई नमस्कार गरिरहेकोजस्तो भान हुन्थ्यो। सडकपेटीहरू पनि डुबेकाले पैन्ट काँधमा राखी अन्दाजले बाटो हिंड्नुपथ्र्यो। यस्तो भए पनि साउन सङ्क्रान्तिको साँझ म बर्वाका मोहन महतो कोइरीको घरतिर जाँदै थिएँ। साउन १ गतेका दिन बिहानै कलैयामा को.के. का नवप्रवेशी मुकुन्द श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए र यातना पाएमा उनीबाट धेरै कुरा खुल्ने डर थियो। आफैं पक्राउबाट बच्नुपर्ने र साथीहरूलाई पनि सतर्क गराइदिनुपर्ने मेरो जिम्मेवारी थियो। कुनै पनि भूमिगत पार्टीको पोल खुल्नु भनेको जीवनमरणको प्रश्न हुन जान्छ, त्यसमा पनि त्यो बेला तानाशाही शासन थियो। २०२५ सालदेखि म वाम राजनीतितिर आकर्षित भए पनि यस भित्रका विभिन्न चिराले गर्दा को सही को गलत निक्र्योल गर्न गार्‍हो परेको थियो। २०३२ सालमा कोअर्डिनेशन कमिटी–